Kufuridzira Kushambadzira Maitiro | Martech Zone
Chipiri, Gunyana 13, 2011 Chitatu, October 26, 2011 Douglas Karr
Dzimwe dzinoverengeka dzinonakidza dzakabatana neshoko remuromo kushambadzira. Mune mawonero angu, iyi ndiyo nzira isingatarisirwe yekutengesa ne, pamwe, iyo yakanyanya kukanganisa. Makambani, zvigadzirwa nemasevhisi akakosha kutaura nezve skyrocket mukuzivikanwa nekuda kweiyi inoshamisa chiteshi. Mumakore achangopfuura, nekuuya kwemasocial media, simba riri kufamba chaizvo nekumhanya kwechiedza.
Zvimwe chete, iwe une chimwe chinhu anoshamisa, vanhu vachadaro remark. Kana zvirevo izvi zvaburitsa kutengesa, hapana imwe chiteshi inogona kuuya padyo kudzikisa mutengo wako pachutungamiri uye nekukurumidza kutengesa.
Chinokosha cheiyi zano kutsvaga vanhu vakakosha vanogona kubatidza fuse pane yako inotevera yekushambadzira. Sisitimu senge Klout uye Appinion vatangisa, kuyedza kutsvaga vanopesvedzera kuburikidza neyekudyidzana algorithms uye zvibodzwa. Uyu musika wechidiki une mukana wakawanda.
Iko kusanzwisisika kwekukura uye kufarirwa kweiyi chiteshi ndechekuti iri, zvakare, kuunza zvemukati marongero, kusanganisira vezvenhau uye blogging, kumberi kwekuvandudza izwi remuromo kushambadzira uye kukurudzira mishandirapamwe.